Qaramada Midoobay Oo 7 Milyan Oo Doollar Ugu Deeqday Barakacayaal 400,000 Ka Badan | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Qaramada Midoobay Oo 7 Milyan Oo Doollar Ugu Deeqday Barakacayaal 400,000 Ka Badan
Hargeysa, (Hubaal) – Sanduuqa Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha deg-degga ah, ayaa bixiyay 7 Milyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu xoojiyo adeegyada badbaadada ee barakaceyaasha ku nool Magaalada Muqdisho, sida lagu sheegay Bayaan kasoo baxay Qaramada Midoobay Jimcihii. kharashkaas ayaa waxaa gaar ahaan laga bixiyay qasnadda arimaha gargaarka Soomaaliya ee OCHA ee SH, sida lagu caddeeyay bayaanka Qaramada Midoobay, waxaana loogu Talo-galay in sare loogu qaado Cuntada barakaceyaasha ku nool Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Lacagtan, ayaa waxaa sidoo kale lagu badhi-taari doonaa Waxbarashada, helitaanka raashinka, caafimaadka, guryeynta, biyaha iyo faya-dhowrka Deegaannada ay Muqdisho ka deggan yihiin Barakacayaashu.
“Barakaceyaasha Soomaaliya caqabado waaweyn ayaa heysta waxaana u habboon taageero bani-aadminimo oo wakhtigii la rabay ay helaan si baahidooda wax looga qabto. In badan oo ka tirsan ayaa ka faa’iidi doona Taageeradan.”ayaa lagu yidhi, Bayaanka ka soo ka baxay Qaramada Midoobay Jimcihii doraad, kaas oo soo xiganayey Isku-duwaha Arrimaha gargaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr. Peter de Clercq.
Masuulkani waxa kale oo uu sheegay in xad-gudbyada ka dhanka xaquuqul insaanku aad ugu badan yihiin xeryaha barakaceyaasha ee Muqdisho ku yaalla oo ay wakhtigan ay ku nool yihiin 400.000 oo qayb ka ah 1.1 milyan oo barakaceyaal ah oo ku filiqsan Soomaaliya.